သျှင်နေမင်း: October 2011
Posted by သျှင်နေမင်း at 9:21 AM
ဆန်းစစ်ဝေဖန်သော စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်း (Critical Thinking)
စဉ်းစား တွေးခေါ်မှုတွင် ရှင်းလင်း သိမြင်အောင် တွေးခေါ်ခြင်း (Clear thinking)၊ ပြုပြင် ဖန်တီးနိုင်အောင် တွေးခေါ်ခြင်း (Creative thinking) နှင့် ရည်ရွယ်ချက် ပြည့်ဝအောင် တွေးခေါ်ခြင်း (Purposeful thinking) တို့သည် တစ်ဦး တစ်ယောက်၏ အရည်အသွေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု တန်ဖိုးများ ဖြစ်ကြသည်။ လူသားတို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀တွင် သတင်းအချက်အလက်များ လွှမ်းမိုးလျှက်ရှိပြီး ယင်းတို့တွင် မှားယွင်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ရှိနိုင်သကဲ့သို့ မှန်ကန်သော သတင်း အချက်အလက်များလည်း ရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ သတင်းစာ၊ ရေဒီယို၊ တီဗွီ၊ အီးမေလ်၊ တယ်လီဖုန်း၊ အင်တာနက်၊ ဂြိုဟ်တုသတင်း၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း စသည်တို့မှ ကွဲပြားခြားနားသော သတင်းအချက်အလက်များ နေ့စဉ် ၀င်ရောက်လျှက်ရှိသည်။ “စားကြည့် … အရသာ သိပ်ရှိတယ်”၊ “သုံးကြည့်လိုက်ပါ … တစ်ပတ်အတွင်း (၁၀) ပေါင် ကျသွားမယ်”၊ “ရင်းနှီးကြည့်လိုက်ပါ … ခင်ဗျားရဲ့ မြေး၊ မြစ်၊ တီ၊ တွတ်၊ ကျွတ် အထိ ချမ်းသာသွားမယ်” အစရှိတဲ့ နေစဉ် ကြားနေရတာတွေ အားလုံးကို ယုံရတော့မှာလား။ မြင်သမျှ၊ ကြားသမျှ အားလုံးကို မယုံကြည်ရဘူးလို့ အားလုံး နားလည်ထားကြသော်လည်း များပြားလွန်သော အချက်အလက်တို့ကြောင့် စိတ်ဝင်စားမှု မရှိတော့လျှင် သို့တည်းမဟုတ် အဆိုးမြင်ဝါဒီ ဖြစ်သွားခဲ့လျှင်ကား ကံဆိုးခြင်းသာ ဖြစ်ပေတော့မည်။ မည်သို့မည်ပုံ စဉ်းစားရမည်နှင့် မည်သို့မည်ပုံ ဆောင်ရွက်ရမည်ကို ခွဲခြားနိုင်စွမ်း ရှိတော့မည် မဟုတ်ပါ။
အမှန်တရားနှင့် အသိပညာသို့ ချဉ်းကပ်ခြင်း (Approach to Truth and Knowledge)
လူတစ်ဦး၏ ကျွမ်းကျင်မှု (Skill)၊ အယူအဆ (Attitude) နှင့် ချဉ်းကပ်ပုံ (Approach) တို့သည် သတင်း အချက်အလက်များကို တန်ဖိုးဖြတ်စေပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ပြဿနာ တစ်ရပ်ကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် အတွက် စဉ်းစား တွေးခေါ်ရာတွင် ချဉ်းကပ်မှု ပုံသဏ္ဌာန် အမျိုးမျိုး ရှိသည်။
ပြဿနာ တစ်ရပ်ကို ဖြေရှင်းရန် စဉ်းစား တွေးခေါ်ခြင်းတွင် ချဉ်းကပ်ပုံ အမျိုးမျိုး (Different approaches to thinking to solveaproblem)
ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာ စဉ်းစား တွေးခေါ်ခြင်း (Analytical thinking) သည် ပြဿနာ တစ်ရပ်၏ ပါဝင် ဖွဲ့စည်းထားသော အစိတ်အပိုင်းများကို တစ်စစီ ခွဲခြား စဉ်းစားခြင်း ဖြစ်သည်။ မည်သည့် အပိုင်းက ပြဿနာ ဖြစ်စေသည်ကို ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာ ဆုံးဖြတ်ရမည် ဖြစ်သည်။ ပြုပြင် ဖန်တီးနိုင်အောင် တွေးခေါ်ခြင်း (Creative thinking) တွင် အသစ် တီထွင်ထားသော နည်းလမ်းများဖြင့် ပြဿနာကို မည်သို့မည်ပုံ ချဉ်းကပ်ရမည်ကို စဉ်းစား တွေးခေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျိုးကြောင်းပြ စဉ်းစား တွေးခေါ်ခြင်း (Logical thinking) တွင် အစီအစဉ်တကျ ယေဘုယျမှ အတိအကျ အဖြေရအောင် ကျိုးကြောင်း ဆင်ခြင်ခြင်းဖြင့် ရှင်းရှင်း လင်းလင်း သိရှိရန် စဉ်းစား တွေးခေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆန်းသစ် ဝေဖန်သော စဉ်းစား တွေးခေါ်ခြင်း (Critical Thinking) တွင် မိမိ မည်သည့် အရာကို ပြီးမြောက်အောင် ကြိုးစားနေသည်။ အောင်မြင်ပြီးနောက် မည်သည့် အကြောင်းအရာကို သိရှိလာမည်ကို စဉ်းစား တွေးခေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်း (Reflective Thinking) တွင် ပြဿနာ၏ အလုံးစုံ အဓိပ္ပာယ်က ဘာလဲဆိုတာ စဉ်းစား တွေးခေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို စဉ်းစား ဖြေရှင်းရာတွင်မူ ဆန်းစစ် ဝေဖန်သော စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်းနှင့် လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်းကို အခြေခံပါသည်။ ဆန်းစစ်ဝေဖန်သော စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်း (Critical Thinking) ကို စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု၏ ဗဟိုချက်မ အဖြစ် ထားရှိပါသည်။ ဤစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုသည် စနစ်တကျ၊ ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိ တာဝန်သိသိဖြင့် သီဝရီများ၊ အချက်အလက်များနှင့် အယူအဆများကို စိစစ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အား စိန်ခေါ်လျှက်ရှိသည်။ ဤစဉ်းစားတွေးခေါ်သည် အခြားသော စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုများ၊ နည်းလမ်းများနှင့် ချဉ်းကပ်မှု ပုံစံများကို မျှဝေ ရယူသည်။ အရေးကြီးသော ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အယူအဆများကို ပေါင်းစပ် ဖြည့်ဆည်း ပေးသည်။ ထို့ပြင် စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု ဖြစ်စဉ်ကို ချမှတ်ရာတွင် စနစ်တကျ စီမံချက် ရေးဆွဲရန်လည်း စိန်ခေါ်လျှက် ရှိသည်။
ဆန်းစစ် ဝေဖန်သော စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်းသည် အငြင်းပွားနေသော အကြောင်းအရာများ၏ အဖြေထုတ်ခြင်းနှင့် ကြောင်းကျိုး ဖော်ပြချက် အမျိုးအမျိုးကို တန်ဖိုးဖြတ်ခြင်းတို့ အတွက် မဟာဗျူဟာကို ချမှတ်နိုင်ခြင်းနှင့် တိမ်မြုပ်နေသော အတွေးအခေါ်နှင့် နည်းလမ်းများကို ဖော်ထုတ်ခြင်းတို့တွင် အကူအညီ များစွာ ပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဆန်းသစ်ဝေဖန်သော စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်း ဆိုင်ရာ အမျိုးသားကောင်စီ (National Council for Critical Thinking) မှ ရစ်ချက်ပေါ (Richard Paul) က ဆန်းစစ် ဝေဖန်သော စဉ်းစား တွေးခေါ်ခြင်းကို အဆင့် (၁၀) ဆင့် ခွဲခြား ပြထားသည်။
၁။ သင်၏ စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ။
(What is the purpose of your thinking?)
၂။ သင် ဖြေနိုင်ရန် ကြိုးစားနေတဲ့ မေးခွန်း အတိအကျက ဘာလဲ။
(What precise question are you trying to answer?)
၃။ သင် စဉ်းစားတွေးခေါ်နေတာက ဘယ်ရှုထောင့် အတွင်းကလဲ။
(Within what point of view are you thinking?)
၄။ သင် အသုံးပြုနေတဲ့ အချက်အလက်က ဘာလဲ။
(What information are you using?)
၅။ အဲဒီ အချက်အလက်ကို သင်ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပါသလဲ။
(How are you interpreting that information?)
၆။ သင့်ရဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုက ဘယ် အယူအဆ (သို့မဟုတ်) အတွေးအခေါ်ကို ဗဟိုပြုထားတာလဲ။
(What concepts or idea are central to your thinking?)
၇။ ဘယ်လို အဖြေဆီသို့ သင် ဦးတည်ထားပါသလဲ။
(What conclusions are you aiming toward?)
၈။ သင် က ဘာကို အာမခံချက် ပေးမှာလဲ။ ဘယ်လို မှန်းဆချက် ပေးမှာလဲ။
(What are you taking for granted? What assumption are you making?)
၉။ သင် ဒီအဖြေကို လက်ခံခဲ့လျှင် ဘယ်လို ရိုက်ခတ်မှုတွေ ဖြစ်လာမှာလဲ။
(If you accept the conclusion, what are the implication?)
၁၀။ အကယ်၍ သင့် အတွေးအခေါ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ရင် ဘယ်လို အကျိုးဆက်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာမှာလဲ။
(What would the consequences be, if you put your thoughts into action?)
သတိပြုရမည်မှာ ဆန်းစစ်ဝေဖန်သော စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင် အလေးအနက်ထား စဉ်းစားခဲ့ပြီး သင်ကိုယ်တိုင် အမှန်ကန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ ဖြစ်သည်။ ဆန်းစစ်ဝေဖန်သော စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်းဖြင့် ပြဿနာတစ်ခုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ခြင်း၊ မိမိ လုပ်ဆောင်နေစဉ်မှာပင် တိုးတက်မှုကို ထောက်လှမ်း သိရှိနိုင်ခြင်းနှင့် မိမိ ချမှတ်ထားသော နည်းဗျူဟာကို တန်ဖိုးဖြတ်နိုင်ခြင်း အစရှိသော အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်သည်။
ဆန်းစစ်ဝေဖန် စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်ရန် လိုအပ်သော အရည်အသွေးများ
ပါမောက္ခ ကာရင် ဂျေ ၀ါရင် (Professor Karen J. Warren) က အောက်ဖော်ပြပါ အရည်အသွးများ လိုအပ်သည်ဟု အကြံပေးပါသည်။
၁။ သံသယဖြင့် ရှုမြင်ခြင်းနှင့် ဘက်လိုက်မှု ကင်းခြင်း (Skepticism and Independence)
ကြားရတိုင်း ဖတ်ရတိုင်း မယုံပါနှင့်။ ကျွမ်းကျင်သူများပင် တစ်ခါတစ်ရံ မှားယွင်း တတ်သည်။
၂။ သဘောထားကြီးခြင်းနှင့် ပြောင်းလွယ် ပြင်လွယ်တတ်ခြင်း (Open-mindedness and flexibility)
ကွဲပြား ခြားနားသော အမြင်များကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားခြင်းနှင့် အခြားသော ရှင်းပြခြင်းများကို လက်သင့်ခံခြင်း စသော အရည်အသွေးများ ရှိရမည်။ သင့် အမြင်နှင့် ကွဲပြား ခြားနားသော အမြင်များကို ငြင်းချက်ထုတ်ရန် ကြိုးစားခြင်းဖြင့် သင့် အမြင်တွင် ရှိနေသော အားနည်းချက်များနှင့် ကန့်သတ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
၃။ တိကျခြင်းနှင့် စနစ်တကျဖြစ်ခြင်း (Accuracy and orderliness)
အကြောင်းအရာကို တိကျ နိုင်သမျှ တိကျအောင် ကြိုးပမ်းရမည်။ ပြဿနာ တစ်ခုလုံးကို တစ်စိတ်ချင်း၊ တစ်ပိုင်းချင်း စနစ်တကျ ဖြေရှင်းပါ။ သင် အသုံးပြုသော စံနှုန်းများကို စည်းကမ်း ချမှတ်ပါ။
၄။ မဆုတ်မနစ် ကြိုးပမ်းမှုနှင့် လျော်ကန် သင့်မြတ်မှု (Persistence and relevance)
အဓိက အချက်ကို ထိမိပါစေ။ လမ်းကြောင်း မလွဲပါစေနှင့်။ လမ်းကြောင်း လွဲနိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ကိစ္စများကို ခွင့် မပေးပါနှင့်။ အချက်အလက်များက စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ကောင်းမည် သို့မဟုတ် မှန်ကန်မည် သို့သော် လျော်ကန် သင့်မြတ်မှု ရှိပါစေ။
၅။ ဆက်စပ် သိမြင်ခြင်းနှင့် စာနာကြည့်ခြင်း (Contextual sensitivity and Empathy)
အချက်အလက်များကို တန်ဖိုးဖြတ်ရာတွင် အခြေအနေ အားလုံး၊ လျော်ကန် သင့်မြတ်သော ဆက်စပ် သိမြင်ခြင်း၊ ခံစားသိခြင်း၊ ပညာ အရည်အသွေးနှင့် အခြားသူများ၏ အတွေ့အကြုံများကိုလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားပါ။ အခြား တစ်စုံတစ်ယောက်၏ နေရာတွင် မိမိကိုယ်ကို ထား၍ မည်သို့ ခံစားရလိမ့်မည်ကို ခံစားကြည့်ပါ။
၆။ ပြတ်သားသော ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် သတ္တိ (Decisiveness and courage)
အဖြေ ထုတ်ပါ။ သက်သေ ခိုင်လုံလျှင် တိတိကျကျ ရပ်တည်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် သင်သည် ပိုမို တိကျသော သတင်း အချက်အလက်နှင့် ပိုမို၍ ကြောင်းကျိုး ဆီလျော်သော အချက်အလက်များ ရယူလိုသော်လည်း အခြေအနေပေးသော နေရာသည်သာ လုပ်ဆောင်ရန် အတွက် အခြေခံ ဖြစ်နေလေ့ရှိသည်။ သတ္တိရှိပါ။
၇။ မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချခြင်း (Humility)
သင် မှားနိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။ အနာဂါတ်မှာ ပြန်လည် စဉ်းစားဖို့ တောင်းဆိုလာ နိုင်သည်။ အဆုံးစွန် မှတ်ချက်ချဖို့ သတိထားပါ။ တစ်နေ့နေ့မှာ သင် ကိုယ်တိုင် စိတ်ပြောင်းလဲရန် လိုလာမည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိမ့်ချပါ။
ဆန်းစစ်ဝေဖန်သော စဉ်းစား တွေးခေါ်ခြင်းတွင် ကျိုးကြောင်း ဆီလျော်မှု၊ အစီအစဉ် ကျနမှုနှင့် စနစ်တကျ ရှိမှုများ ပါဝင်သည့် အပြင် စာနာခြင်း၊ ခံစားသိခြင်း၊ သတ္တိရှိခြင်းနှင့် နှိမ့်ချခြင်း စသည့် လက္ခဏာများလည်း ဆောင်နေပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ သိပ္ပံပညာတွင် သာမန် ကျိုးကြောင်း ဆီလျော်မှု (Simple logic) ထက် ပိုသော အချင်းအရာများ ရှိပါသည်။ လွယ်ကူသည်တော့ မဟုတ်ပါ။ အကြိမ်ကြိမ် လေ့ကျင့်ရပါမည်။ ပညာရှိ ဂုဏ်သိက္ခာ(Intellectual integrity)၊ ဣနြေ္ဒ သမ္ပတိ်္တ (Modesty)၊ မျှတမှု (Fairness)၊ အကြင်နာ မေတ္တာ (Compassion) နှင့် ခံနိုင်ရည် ဇွဲသတ္တိ (Fortitude) အစရှိသော ဂုဏ်ရည်တို့သည် ချက်ချင်း မရရှိနိုင်ပါ။ သင်၏ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကို အရည်အချင်းများ ပုံမှန် တည်ရှိနေစေရန် အစဉ်တစိုက် မွေးမြူရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဆန်းစစ် ဝေဖန်သော စဉ်းစား တွေးခေါ်ခြင်း လုပ်ဆောင်ပုံ (Applying Critical Thinking)
တီဗွီကြေငြာမှာ “ဒီမုန့်ကို စားကြည့်ပါ သိပ်အရသာရှိ သိပ်ကောင်း၏” လို့ မြင်လိုက် တွေ့လိုက်ပြီ ဆိုပါစို့။ သင် ယုံမှား သံသယ ဖြစ်ပေါ်လာလျှင် မေးခွန်းများ ထုတ်ကြည့်ပါ။ ကောင်းတယ် ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်သူ့ အတွက် ကောင်းတာလဲ၊ ဘာ ကောင်းတာလဲ၊ အရသာရှိတယ် ဆိုတာက ချို တာလား၊ ငန် တာလား၊ ဒီကြေညာက သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပျော်ရွှင်မှု အပြင် သင့် စိတ်ကို နှိုးဆွပေးတဲ့ အခြားအကြောင်း ရှိသလား၊ ဤကဲ့သို့ မေးခွန်းတွေ ထုတ်လိုက်ရင် သင် သတိ မထားမိသော်လည်း ဆန်းစစ် ဝေဖန်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဆန်းစစ် ဝေဖန်သော စဉ်းစား တွေးခေါ်မှု လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာတို့သည် တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့်လုပ်ရန် လိုပါသည်။
၁။ အကြောင်းပြချက်များနှင့် အဖြေများကို ဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်းဖြင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော် ရမည်။ တန်ဖိုးဖြတ် ရမည်။
၂။ မသေချာ မရေရာမှုများ (Uncertainties)၊ မသဲမကွဲများ (Vagueness)၊ မပြတ်မသား မရေမရာ ဖြစ်ခြင်းများ (Equivocation) နှင့် ၀ိရောဓိ ဖြစ်ခြင်းများ (Contradiction) ကို အသိအမှတ် ပြုရမည်။ ရှင်းလင်းရမည်။
၃။ အမှန်တရား (facts) နှင့် တန်ဖိုး (value) ကို ခွဲခြားပါ။
၄။ မှန်းဆချက်များ (assumption) ချမှတ်ပါ။ အမှတ်ရပါ။
၅။ သတင်း အချက်အလက်များ ရရှိရာ နေရာ၏ ယုံကြည် စိတ်ချရမှု ရှိမရှိ ခွဲခြားပါ။
၆။ အယူအဆ အပေါ် အခြေတည်သော ဘောင်ခတ်မှု (Conceptual framework) ကို နားလည်ပါ။ အသိအမှတ် ပြုပါ။ (လူတစ်ဦး၊ အုပ်စု တစ်စု သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု၏ အခြေခံ ယုံကြည် ကိုးကွယ်မှု၊ အယူအဆနှင့် တန်ဖိုးထားမှုတို့သည် သူ သို့မဟုတ် သူတို့၏ အမြင်ကို စိုးမိုး ခြယ်လှယ်သည်ကို သိမြင်ရန် ဖြစ်သည်။ ထိုအမြင်များကြောင့် မိမိနှင့် အယူအဆ ကွဲပြား ခြားနားနေလျှင် မည်သို့မည်ပ ဖြေရှင်းရမည်ကို စဉ်းစားရမည် ဖြစ်သည်။
ပတ်ဝန်းကျင် သိပ္ပံပညာရပ် (Environmental science) ကို လေ့လာရာတွင် ဆန်းစစ် ဝေဖန်သော စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု၏ အရေးပါပုံကို ပိုမိုနားလည် နိုင်ပါသည်။ ဤ ပညာရပ်သည် အဆက်မပြတ် ပြောင်းလဲနေသော တစ်နည်းအားဖြင့် အသား မကျသေးသော ပညာရပ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းများတွင် ပါရှိသည့် အယူအဆ၊ သီဝရီနှင့် အချက်အလက် အားလုံးသည် မှန်ကန်ပြီးပြည့်စုံပြီဟု ပြောဆိုရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ အယူအဆများသည် ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံး၏ ပြည့်စုံသော ရုပ်ပုံလွှာတစ်ခု အဖြစ် ကိုယ်စား မပြုနိုင်ပါ။ အချက်အလက်များ မည်မျှပင် ပြည့်စုံကျယ်ပြန့်စေကာမူ အားလုံးကို သိရှိရန် ခြုံငုံနိုင်စွမ်း ရှိလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ အကြောင်းပြချက် (Premises) များသည် မည်မျှပင် ခိုင်လုံစေကာမူ ၎င်းတို့မှ ဆွဲထုတ်လိုက်သော အဖြေ (Conclusion) မှန်ကန်ပြီဟု မဆိုနိုင်ပါ။
Ref: Environmental Science by Cunningham (A Global Concern)
Posted by သျှင်နေမင်း at 3:39 AM
မိကောက်ဆိုတာ ကျွန်တော်သမီးလေရဲ့ကစားဖော် ကစားဖက်တွေပါ၊ မိကောက်ဆိုတဲ့နာမည်လေးက စာဖက်
သူတွေအတွက် အနည်ငယ်ထူဆန်းနေသလို၊ သူမနှင့်ကျွန်တော်ဆုံတွေ့ ရတာလည် ထူဆန်းနေပါတယ်။
ကျွန်တော်လို ဟိုမရောက်၊ဒီမရောက် စာရေးဆရာယောင်ယောင်၊ပန်ချီဆရာယောင်ယောင် လူတယောက်အတွက်
ဈေးနီနီ၊တိုက်ကြီးကြီး မနေနိင်တော့ဆင်ခြေဖုံရပ်ကွပ်တခု အိမ်လေးငှားပြီ မိသာစုသုံးယောက်ရဲ့ ဘ၀ရဲ့ ဘ၀အတွက်
ဒီလိုနဲ့ မိုးတွေအရမ်းရွာတဲ့ တနေ့ မှာ ကျွန်တော်ရဲ့ မလုံတလုံထီးလေနဲ့မဂ္ဂဇင်းတိုက်ကစာမူထုတ်ပြီအပြန်မှာ
ကာမှတ်တိုင်အနီမှာ တအင်းအင်း၊တဟီးဟီ နဲ့ ငြီငြူနေပြီး ယောင်လည်လည်ဖြစ်နေသော သူမကိုတွေ့ လိုက်ရတယ်၊
မွေးဖွာခြင်းနဲ့ အတူပါလာတဲ့ သနားစိတ်က အငြိမ်မနေနိင်ပဲ သူမကိုအိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့ မိတယ်.....။
မိုးရေတွေ စိုစွတ်နေတဲ့ သူမရဲ့ ခန္ဒာကိုယ်ပေါ်ကို ကျွန်တော်ရဲ့စောင်ပိုင်းစုတ်လေး ဖုံးအုပ်ပေးပြီ မိသားစုအတွက်
၀ယ်လာတဲ့ခေါက်ဆွဲကြော်ထဲက တ၀က်ကို သူမကိုကြွေးလိုက်တယ်၊ မွတ်သိပ်စွာစားသောက်ပြီ ကျွန်တော်ကို
ကြည်တဲ့မျက်ဝန်းတွေထဲမှာ ကျေးဇူတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေပြောနေတာ ကျွန်တ်ေစိတ်ထဲမှာ အလိုလို
စကားမပြောတက်တဲ့သူမကို ကျွန်တော်သမီးလေက နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်၊ လမ်းဘေးက ခေါ်လာခဲ့ တဲ့ အတွက်
မိကောက်တဲ့..ဒီနာမည်လေးကို သူမ အရမ်းသဘောကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်၊ ဘာကြောင့် လည်ဆိုတော့ 
မိကောက်လို့နှစ်ခွန်းပဲခေါ်မိလိုက်တယ် သူမ မော့ ကြည့် လိုက်ပြီ သူမကိုခေါ်တယ်ဆိုတာ သူမသိနေတယ်လေ။
အစားအသောက်မှန်နေတဲ့မိကောက်ဟာ တနေ့ တခြားအရမ်းလှနေတယ်၊အ၀ါရောင်သန်းနေသော သူမရဲ့ 
ခန္ဒာကိုယ်ရယ်၊ ၀ိုင်းစက်နေသော သူမရဲ့ မျက်ဝန်းတွေကို မြင်ရသူများက အသိအမှတ်ပြုကြပါတယ်။
ကျွန်တော်မဂ္ဂဇင်းတိုက်ကဖြစ်စေ၊ပန်ချီပြခန်းကဖြစ်စေ ပြန်လာခဲ့ ရင် မိကောက်က အိမ်ရှေ့ က ထွက်ကြိုတက်ပါတယ်၊
အိမ်မှာ ကျွန်တော်မရှိတဲ့ အချိန်မှာ မိကောက်နဲ့ သမီးလေးက ကစားဖော်၊ကစားဖက်တွေပေါ့ ၊ သမီးလေနဲ့ မိကောက်
တနေ့ တခြား သံယောဇဉ်တွယ်နေသလို၊ကျွန်တော်ဇနီးနဲ့ ကျွန်တော်ကလည် လိမ္မာလှတဲ့မိကောက်ကို သံယောဇဉ်
ကျွန်တော်တို့မိသားစုလိုပဲ မိကောက်ကိုကြိတ်ပြီသဘောကြနေတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်မသိခဲ့ ဘူး၊
နောက်ဆုံးကျွန်တော် သိလိုက်ရတာကတော့ ထိုသူနာမည်က ဦမင်းမောင် ရပ်ကွပ်ထဲမှာ ရေစည်လှည်တွန်းရောင်းသလို
လစ်ရင်လစ်သလို ခိုးတက်၊၀ှက်တက်ပြီ မူးလာရင် ရမ်းကားတက်တဲ့ သူပါ၊ ဦမင်းမောင်လို လူတယောက်၇ဲ့စိတ်ဓာတ်
ကို သဘောမကြလို့အပေါင်းအသင်းမလုပ်ပါဘူး၊
တနေ့ တော့ပန်ချီပြခန်းတခုက ညဉ်နက်မှအိမ်ပြန်လာတဲ့ကျွန်တော်ကို ဦမင်းမောင်တို့ အရက်သမားတစုက
ရပ်ကွပ်ရဲ့ကင်းတဲထဲကနေလှမ်းခေါ်ပြီး ထမင်းခေါ်ကြွေးကြတယ်၊သူတို့ အမဲသားဝယ်ပြီ စုချက်စားကြတဲ့ အတွက်ပါတဲ့ ၊
ကျွန်တော်ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ စွာငြင်းဆိုပြီ အိမ်ဖက်ကိုဆက်လျှောက်လာခဲ့ တယ်၊ဒါပေမယ့်စိတ်ထဲမှာ ထူဆန်းနေသလို
ကျွန်တော်အိမ်ထဲရောက်တော့မျက်နှာမကောင်းတဲ့ ဇနီးရယ်၊မျက်လုံးတွေ မို့ အစ်စွာ ငိုကြွေးထားတဲ့သမီးလေရဲ့ 
မျက်နှာကိုမြင့် တွေ့ လိုက်ရပါတယ်။
အကျိုးအကြောင်းမေးမြန်းကြည့် တော့ညနေခင်ဲးက မိကောက်ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း၊ယခုအချိန်ထိပြန်မလာ
သေးကြောင်း သမီးလေးက ငိုကြွေးပြီ ကျွန်တော်ကိုပြောတယ်။
အားလုံးကို ကျွန်တော်သိလိုက်ပါပြီ၊မိကောက်ဆိုတဲ့ ခွေးမလေးကို အကြင်နာမဲ့ စွာ သတ်ဖြတ်စားသောက်သော
လူ့ ဘီလူးတသိုက်ကို ကျွန်တော်မတုန့် ပြန်တော့ ပါဘူး၊ဘာကြောင့် လည်ဆိုလျှင် သူတို့ ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာ
တိရစ္ဆာန်တွေထက် ကြမ်းတမ်းမိုက်မဲနေမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိနေလို့ ပါ....။
သမီးလေးကို ရင်ခွင်ထဲပွေ့ ပိုက်ပြီ ပြန်မလာနိင်တော့ တဲ့မိကောက်အတွက် ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်...
Posted by သျှင်နေမင်း at 7:25 AM
အခုတလော လူပြောများနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အတိုလေးပါ၊စင်္ကာပူသတင်းမှာ အခုတ်တရနဲ့ ဖော်ပြသွားပါတယ်၊
လက်ရှိဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ တရုတ်လူမျိုးအချို့ ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာ တရုတ်လူမျိုးအားလုံးကို ကိုယ်စား
မပြုပါဘူး၊ဘာကြောင့် လည်ဆိုလျှင် ပြီခဲ့ သောလအနည်းငယ်က ကိုပီတာ ဘလော(ဂ်)တွင် ဒုက္ခတအဖိုးကြီးအား
ထီးမိုးပေးခဲ့ သော တရုတ်လူမျိုးမိန်ခလေး၏ သတင်းကိုဖက်ပြီ ကြည်နူးပီတိဖြစ်ရသလို၊ ယခုဗီဒီယိုထဲတွင် အကြင်
နာကင်းမဲ့ သော၊ လူမှုရေးအသိစိတ်ဓာတ်ကင်းမဲ့ သော တရုတ်လူမျိုးတစုကို ကြည့် ပြီ အံသြဒေါသထွက်ရပါတယ်၊
ထိုကြောင့်တရုတ်လူမျိုးများကို ဘာလဲ၊ဘယ်လဲဟုမေးရပါလိမ့် မယ်၊ အကောင်းနှင့် အဆိုး ဒွန်တွဲနေသော လူ
လောကကြီးထဲမှာ မြန်မာပြည် ဘာလဲ၊ဘယ်လဲဟု မမေးတော့ ပါဘူး၊ ဘာကြောင့် လည်ဆိုလျှင် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ 
ပါတယ်ဆိုသော ဗုဒ္ဒဘာသာမြန်မာနိင်ငံတွင်း စက်တင်ဘာအရေးအခင်းက လက်ညိုးထိုးစရာဖြစ်နေသောကြောင့် ပင်တည်။
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိင်ငံတွင်းဆိုလျှင် တိုက်မိသွားသော ခလေးအတွက် တာဝန်ယူမဖြေရှင်းပဲ ထွက်ပြေးသွား
လျှင် နောက်ကနေ အုတ်ခဲများပစ်သွင်းခံရမှာ မြင်ယောင်မိပါသေးသည်၊လက်ရှိခလေးရဲ့ သတင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီ
စင်္ကာပူသတင်းမှာတော့ဆေးကုသမှုခံယူနေတယ်ဆိုသည့် အကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ခလေးငယ်အတွက် ဆုတောင်းပေးသင့် ပါတယ်၊အမြန်ဆုံး သက်သာပျောက်ကင်းပြီ
တရုတ်ပြည်အတွက် အများအကျိုးသယ်ပိုးနိင်သော သမီးကောင်ရတနာဖြစ်ပါစေဟုဆုတောင်းရင်..
တဆက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်လို ကျွန်တော်ဘလော့(ဂ်)ကို နှုတ်မဆက်ပဲစာဝင်ဖက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို
တောင်းပန်ပါတယ်၊ဘ၀တွေကခါး ရသတွေရှားနေလို့ ပိုစ့် အသစ်တွေမတင်နိင်သေးပါဘူး။
Posted by သျှင်နေမင်း at 7:49 AM
စိတ်ဝင်စားအောင်ခါင်စဉ်ပေးပြီ ကျွန်တော်ရေးမဲ့အကြောင်းအရာက စာအုပ်တွေထဲမှာဖက်ခဲဖူတာတွေ၊ လူကြီး
တွေပြောပြတာတွေ ပြန်ရေးထားတာပါ၊ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကိလေသာကုန်ခန်းနေတဲ့သူတော်စင်မဟုတ်ပါဘူး၊
ကောက်ကြောင်းတွေများတဲ့မိန်ကလေးတွေကို မသိမသာ ငန်းတက်ပါတယ်..ဘာကြောင့် လည်ဆိုတော့ 
ကျွန်တော်ဟာ ယောင်္ကျားစင်စစ် ဧကန်ဖြစ်နေလို့ ပါ....:P
မှတ်မှတ်ရရ ဖက်ခဲ့ ဖူသော စာအုပ်လေးက ကာလီဒါသ ပညာရှိအမတ်တယောက်အကြောင်းပါ၊ မူမတ်တွေ အစုံ
အလင်နဲ့ ညီလာခံထဲမှာ ဘုရင်က ကာလီဒါသ အမတ်ကိုမေးခွန်ထုတ်ပါတယ်၊ "အမှောင်တကာ အမှောင်ထဲမှာ
အဘယ်အမှောင်က အမှောင်ဆုံးလဲ"ဟု မေးခွန်ထုတ်ပါတယ်....
ကာလီဒါသအမတ်အတွက် အဖြေရကြပ်စေတဲ့မေးခွန်းဖြစ်သလို တပတ်အတွင်း အဖြေမပေးနိင်ရင် အသတ်သေ
စေနိင်တဲ့မေးခွန်းလည်ဖြစ်ပါတယ်၊ ကာလီဒါသ အမတ်လည် မစားနိင်၊မသောက်နိင် တမှိုင်မှိုင် တတွေတွေနဲ့ 
စဉ်းစာနေရတာပေါ့ ၊ဒါကို သမီဖြစ်သူက မေးပါတယ်.အဘယ်ကြောင်းကြောင့်ယခုကဲသို့ဖြစ်နေရသနည်းပေါ့ ။
ကာလီဒါသအမတ်လည်း ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ပြောပြလိုက်တော့သမီဖြစ်သူက သူကူညီမည်ဆိုတဲ့ အကြောင်း
ယနေ့ ညအချိန် သူမအခန်းထဲသို့လာခဲ့ ရန် မှာကြားခဲ့ ပါတယ်.။
ညဉ်အချိန်ရောက်တော့ကာလီဒါသအမတ်လည် သမီတော်မှာကြာခဲ့ တဲ့ အတိုင်း သမီတော်အခန်းထဲသို့ ဝင်
သွာပါတယ်၊ အဲဒီအချိန်မှာ လရောင်အောက်သလွန်ထက်မှာ အိပ်စက်နေတဲ့ သမီတော်ဟာ ၀တ်လစ်စလစ်
ကာလီဒါသအမတ်လည် ရှေ့ တိုးရအခက်၊နောက်ဆုတ်ရအခက်နဲ့မင်သတ်ပြီ သမီးတော်ရဲ့ခန္ဒာကိုယ်အလှအပ
ပေါ်မှာ တွေဝေယစ်မူသွားပါတယ်..တချိန်ထဲမှာပဲ သမီတော်ကရုတ်တရက်ထပြီ " ဖခင် အမှောင်တကာအမှောင်
ထဲမှာ ယခုလို ကာမမှောင် အမှောင်ဆုံးပါ"ဟု ပြောလိုက်ပါတယ်........
ကာလီဒါသအမတ်လည် သဘောပေါက် နားလည်သွာပြီ ညီလာခံထဲမှာ သမီတော်တော်ပြောတဲ့ အတိုင်း"အမှောင်
တကာ အမှောင်ထဲမှာ ကာမမှောင် အမှောင်ဆုံး"ပါဟုလျောက်တင်လိုက်ပါတယ်......
ဘုရင်မင်းမြတ်လည်း သဘောတော်ကြ၍ ဆုလဒ်များ ချီးမြှင့် လိုက်ပါတယ်.........
ကာမတဏှာများကြောင့်သားနှင့် အမေ၊ အဖေနှင့် သမီး တို့ ကိုမှောက်မှားစေနိင်ပါတယ်.ကျွန်တော် ဘာကြောင့် 
ပြောနိင်တာလဲဆိုတော့ပြီခဲ့ သောလအနည်းငယ်ကပဲ စင်္ကာပူမှာ အဖေနှင့် သမီး ဇတ်လမ်းတဗိုဒ်ဖြစ်သွာပါတယ်။
ပြီနောက် မလေးရှား၊ပြင်သစ်၊ဘရာဇီ စသည့် နိင်ငံတွင်းသတင်းတွေမှာ အဖေနှင့် သမီး၊သားနှင့် အမေ၊မြေးနှင့် 
အဖွား ဇတ်လမ်းများကို မဖက်ချင်ပဲ တအံတသြနဲ့ ဖက်ခဲ့ ရလို့ ပါ.........
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိင်ငံဗုဒ္ဒဘာသာတွေထဲမှာ ထိုကဲသို့ အကြောင်းများ မကြားရ၊မမြင်ရ မတွေရချေ ၊ဒါကလည်း
ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ သော ဘာသာတရားကြောင့် ဖြစ်မည်ထင်ပါသည်...
မြတ်မင်္ဂလာစာစောင်တခုတွင် ရေးသာထာသောဇတ်နိပတ်တော်တခုမှ တဏှာကာမကြောင့်မိမိ၏သားဖြစ်
သူ ဒိသာပါမောက္ခ ကိုသတ်သော မျက်မမြင်အဖွားအိုကြီးအကြောင်ကိ
ု ယနေ့ လူငယ်များဗဟုသုတအနေဖြင့် 
အခါတပါးမြို့ တမြို ၏အကြီးအကဲ သဋ္ဌေသားတဦးကို ယောင်္ကျားတို့တပ်အပ်သောအဋ္ဌာသရပ်(၁၈)ရပ်အကြောင်း
ကို သင်စေဖို့ ငှာ အခြာမြို့ ရှိ ဒိသာပါမောက္ခဆရာတယောက်ဆီသို့စေလွတ်လိုက်ပါတယ်၊ ဒိသာပါမောက္ခဆရာ
ဟာ မျက်မမြင်အမေကို လုပ်ကြွေးပြုစုရင်း တဖက်ကလည် မင်းညီမင်းသာ၊သူဋ္ဌေသူကြွယ်သားများကို အဋ္ဌာသရပ်
ဒီလိုနဲ့ သင်ကြာပိုချမှုများကုန်ဆုံးသွာသော ဌာနေရပ်အသီသီကိုပြန်ခဲ့ ကြပါတယ်၊ဒါပေမယ့်မြို့ ရဲ့ အကြီးအကဲ
သူဋ္ဌေသာပြန်ရောက်လာတော့သူ၏မိခင်က မေးပါတယ်၊ သားတော်ပညာရပ်များကုန်ဆုံးပါရဲ့ လာဟု..
သာတော်ကလည် ဓာခုတ်၊လှံထိုး၊ဗေဒင် အတပ်များ အားလုံးကိုသင်ကြားပေးပါတယ်ဟု ပြောပါတယ်။
နောက်သူဋ္ဌေးကတော်က ပါပရအတက်ပညာကို သင်၏ဆရာက သင်ကြားပေးရဲ့လာဟု မေးမြန်ပါတယ်၊ သူဋ္ဌေး
သား လည် ပါပရအတပ်ပညာ ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်းဟု ပြန်လည်မေးမြန်သောအခါ ..
မိခင်က ဘာမှမပြောပဲ သင်၏ဆရာထံသို့တခေါက်ပြန်၍ သင်ကြာပါလေဟု ပြောပါတယ်....
ဒိသာပါမောက္ခဆီသို့ပြန်ရောက်သောအခါ ဆရာက အဘယ်ကြောင့် ပြန်ရောက်လာရသနည်းဟုမေးမြန်သော
အခါ တပည့် ဖြစ်သူ သူဋ္ဌေးသာကလည် သူ၏ မိခင်ပြောသော ပါပရအတပ်ပညာကို သင်ကြာဖို့ ရန် ပြန်ရောက်
လာကြောင်းပြောပါတယ် ။
ဆရာက ခေတ္တစဉ်းစားပြီနောက် ကောင်းပြီ ယနေမှစ၍ အမယ်အိုကြီးကို သူ၏ကိုယ်စာ ပြုစုရမည်ဖြစ်ကြောင်း
သဋ္ဌေသားကလည် ကောင်ပါပြီဟု ပြောပြီအဖွာအိုကြီးကို နေ့ စဉ်နေတိုင်း ပြုစုစောင့် ရှောက်ပါတယ်၊
ပြုစုစောင့် ရှောက်ချိန်တွင် ဆရာသင်ကြားပေးသိအတိုင်း ပြောဆိုဆက်ဆံရပါတယ်။
မျက်မမြင်အဖွားအိုကြီး ရေချိုလျှင် ရေပတ်ဖြင့် ပွတ်သပ်တိုက်ပေးပြီး နှုတ်မှလည် အဖွားငယ်ငယ်က အလွန်လှပ
မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုအချိန်ထိ အသားအရည်မှာ ၀င်းဝါပြီးလှပနေကြောင်း၊အဖွား၏ အသံမှာအလွန်နားထောင်
ရသည်မှာ သာယာနာပျော်ဖွယ်ကောင်းကြောင်း၊ဆံပင်များမှာ ယခုထိ နက်မှောင်နေကြောင်း စသည်ဖြင့်အမျိုး
သမီးများ သဘောကြသော စကားကိုသာ နေစဉ်ရက်စက် တွင်တွင်ပြောလေသည်။း
ထိုအခါအဖွားအိုမှာ လူငယ်၏ အယုအယ၊အမြှောက်အပင့် များကို နေစဉ်ကြား၍ စိတ်ထဲတွင် သဘောကြနှစ်ခြိုက်
လာပြီ ထိုလူငယ်ကိုလည် မိမိအားကြိုက်နှစ်သက်လာသည်ဟုထင်လာသည်။
တနေ့ တွင် မျက်မမြင်အဖွားအိုက လူငယ်အား မိမိအားကြိုက်နှစ်သက်၍ အတူနေချင်လျှင် မင်းရဲ့ ဆရာမရှိမှ
ဖြစ်နိင်မည် ထိုကြောင့်မင်းရဲ့ ဆရာအားလုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ပါဟု အကြံပေးပါတယ်...၊
လူငယ်သူဋ္ဌေသားက လည် သူမလုပ်ကြံဝံ့ ကြောင်းပြန်ပြောသောအခါ အဖွာအိုက ဒါဆိုလျှင် မင်းရဲ့ ဆရာအိပ်
သောနေရာသို့ကြိုးသွယ်တန်းပေးပါဟု စေခိုင်လိုက်ပါတယ်။
ညဉ့် အချိန်သို့ ရောက်သောအခါ မျက်မမြင်အဖွာအိုဟာ ရဲတင်းတချောင်း ကိုင်၍ သူ၏သားရှိသော အခန်းတွင်း
သို့တရွှေ့ ရွှေ့ တိုးကပ်သွားပြီ နောက် ဦခေါင်းရှိရာကို အနည်ငယ်စမ်းအာ အားကုန်လွဲခုတ်လိုက်ပါတယ်။
သိုသော ဒိသာပါမောက္ခဆရာမှာ သူ၏ မိခင်မှာ ဒီနေ့ ၊ဒီရက် ၊ဒီအချိန်တွင်သေဆုံးမည်ကို ကြိုတင်သိရှိသောကြောင့် 
၄င်း၊သူ၏ တပည့် ဖြစ်သော လူငယ်၏ပြောဆိုမှုကြောင့်၎င်း ကြိုတင်သိရှိကာ တနေရာမှနေ၍ အမေဟု ခေါ်လိုက်
ရာ မျက်မမြင်အဖွားအိုမှာ အံသြထိတ်လန့်ရှက်ရွှံစွာဖြင့်ကြောက်လန့် တကြား အပြင်သို့ထွက်ပြေးသွာသော
အခါ ရေတွင်ထဲသို့ကျ၍ သေဆုံးသွာလေသည်။
ဤတွင် ဒိသာပါမောက္ခဆရာက တပည်ဖြစ်သူကို ခေါ်၍ ပါပရအတပ်ပညာဆိုသည်မှာ တဏှာကာမနှင့် ပတ်သတ်၍
မိန်မတို့ ၏ ဖောက်ပြန်ကောက်ကျစ်တက်သော အတွင်းသဘောဟု ပြောဆိုပြီ ပြန်လည်စေလွတ်လိုက်ပါတယ်။
ဒိသာပါမောက္ခဆရာလည် ရသေ့ အသွင်းပြောင်း၍ တရားဘာဝနာပွားများပါတော့ တယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောရလျှင် လူယောက်ျား၊လူမိန်းမတို့ သည် ကာမတဏှာကြောင့်မိမိတို့ ၏အဆင့် အတန်း
ဂုဏ်သိက္ခာများကို မေ့ လျော့ ကြပြီ မိုက်တွင်းနက်ကြကုန်သည်ဆိုသည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။
ထိုကြောင့် ကာမတဏှာဆိုသည်မှာ ကြောက်စရာဖြစ်သည် ၊ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိင်ငံတွင် ထောက်လှန်းရေး
ပေါသော ခရီသည်ယာဉ်အချို့ တွင် ရေးသာထာသောစာတန်းလေးတကြောင်းကို ပြန်လည်သတိရမိပါသည်။
"မိတ်ဆွေ ဆန္ဒကို သိက္ခာဖြင့်ထိန်းပါ" ဆိုသောစာတမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်........
Posted by သျှင်နေမင်း at 8:13 AM
ချစ်သူဖြန့် ဝေတဲ့ဖော်ဝပ်မေးထဲက ကျွန်တော်အကြောင်း
အောက်တိုဘာ .၂၀၁၁ .၁၃ရက်
ကျွန်တော်အတွက် ကံအဆိုးဆုံးရက်တရက်ဆိုတာ ကျွန်တော်ထင်မထားခဲ့ ပါဘူး၊ စက်တင်ဘာ၊အောက်တိုဘာ
နိုဝင်ဘာ၊ဒီဇင်ဘာ ဆိုတဲ့ ဘာလေးဘာ ဟာအစဉ်သဖြင့်ကျွန်တော်အတွက် ကံဆိုတဲ့ လတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်ကိစ္စမဆို ခံစားမှုလွန်ကဲစွာဖြင့် နေတက်တဲ့ကျွန်တော် အဲဒီနေ့ က တနေ့လုံး အလုပ်ထဲတွင် ဘာကြောင့်
့မှန်းမသိ လေလံထိုင်းမှိုင်းနေပြီး အလုပ်ထဲမှာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိပါဘူး၊ အလုပ်စောစာသိမ်းပြီ အဆောင်ပြန် ရေမိုး
ချိုး ထမင်းစာပြီ တခါထဲ အိပ်ယာထဲဝင်ပါတော့ တယ်။
ခဏအတွင်း ပြန်နိုးလာပြီ ကွန်ပြူတာကိုဖွင့် ပြီ မေး စစ်ကြည့် ပါတယ်၊စိတ်ဝင်းစာ စရာခေါင်စဉ်နဲ့မေးတစောင်က
"လူယုတ်မာ တယောက်၏ အကြောင်း" တဲ့ ....
ကောက်ကျစ်ယုတ်မာမှုတွေကို မုန်းတီတဲ့ကျွန်တော် လျှင်မြန်စွာပဲ ဖက်လိုက်ပါတယ်..ရေးထားတဲ့ စာပုဒ်က
To: aungmyintjames , aunglwinoo74@gmail.com,
billyzawmon@gmail.com, chomonm , carolynedavid
, "februarysnow.26" ,
hanthasoe07 , joshuakmw ,
Lwin Ko Win , Tin Ko Win ,
kyaw1979moe@gmail.com, myo.clifford@gmail.com, mgnyanlwin@gmail.com,
nimarwin@gmail.com, oceanwolf77@gmail.com, rsseinlin ,
sopheayimon@gmail.com, thaeeeiphyu , thaeeieiphyu
, thureinsgu , victor yee
, wai.lwinoo09@gmail.com, winkokooo18
, "yarlay.2010" ,
maythinzaroo , mickylay26 ,
myintzawhtilar , minsanmin@yahoo.com, mshero56@gmail.com
မင်္ဂလာတောင်ညွန်မြို့ နယ် , ကျောင်းလမ်း ,တိုက်အမှတ်(xx)တွင်နေပါတယ်၊ လူယုတ်မာ သျှင်နေမင်းကတော့ 
လွန်ခဲ့ သော လအနည်းငယ်က သူနှင့် ကျမ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် တွေ့ ဆုံ ချစ်ကြိုက်ကြပါတယ်၊တနေ့ သူက
အပြင်မှာတွေချင်ကြောင်း ပြောလာပါတယ် ။
ဒီလိုနဲ့သူနှင့် ကျမ တိုင်ရင်းသာကျေးရွာ ချိန်းတွေ့ ကြပါတယ်၊ အအေးဆိုင် တဆိုင်မှာ စကားပြောနေကြတုန်း
ခေါင်းတွေအရမ်းကိုက်လာပြီ အိပ်ချင်လာပါတယ်၊အတန်တန် ကိုယ်ကိုထိန်းနေတဲ့ကြားက ခေတ္တသတိမေ့ သွား
ပါတယ်၊ သတိပြန်ရလာ ချိန်မှာတော့သန်လျှင်မြို့ ရဲ့တည်ခိုခန်းတခုထဲရောက်နေပါတယ်...
ဘေးနာမှာကတော့ကျွန်မရဲ့အသွေးအသားကို ၀ါးမျိုးထားတဲ့သျှင်နေမင်းပေါ့ ..
ကျွန်မ ရှက်လည်ရှက်၊ ဒေါသ လည်း ထွက် ၊အိမ်ကိုလည် ပြန်မတိုင်းရဲပဲ အဲဒီတည်ခိုခန်းက ထွက်ပြေးလာခဲ့ ပါတယ်၊
ပြီတော့အဲဒီ လူယုတ်မာ ကို အဆက်အသွယ်မလုပ်ပဲ (block)လုပ်လိုက်ပါတယ်၊နောက်တနေ့မှာအကောင့် တခု
နဲ့လာအပ်ပါတယ် ပြီတော့ကျွန်မရဲ့ဝတ်လစ်စလစ် ပုံတွေပို့ လာပါတယ် ၊နောက်တကြိမ် သူနဲ့ လာမတွေ့ ရင်
အင်တာနက်ပေါ် တင်မည်ဟု ချိန်းခြောက်လာပါတယ်...
ကျွန်မအကြိမ်ကြိမ် တောင်းပန်တာမရပဲ သူနဲ့ နောက်တခါ တွေ့ ကြပြီ အဲဒီတည်ခိုခန်းတခုမှာပဲ လင်မယာအရာ
မြောက်ရပါတယ်၊ တခါမဟုတ် အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ချိန်ခြောက်တွေ့ ဆုံပြီ လိင်ဆက်ဆံပါတယ်၊နောက်ဆုံးအကြိမ်
မှာတော့သူမလေးရှာထွက်ပြီ အလုပ်လုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြန်လာလျှင် လက်ထပ်မည်ဟု ပြောပြီ နောက်ရက်
အနည်းငယ်မှာပဲ သူမလေးရှားကို ထွက်သွားပါတယ်.....။
မလေးရှာရောက်ပြီ မကြာခင်မှာပဲ သူအဆက်သွယ်မလုပ်တော့ ပါဘူး၊ဖုန်းလည်မဆက်သွယ် အခု ကျွန်မမှာ ကိုယ်ဝန်
(၃) လောက်ရှိနေပါပြီ အဖေ၊အမေ နဲ့ဆွေမျိုးအသိုင်းဝိုင်းတွေကို မပြောရဲ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရင်မဆိုင်ရဲ တာနဲ့ 
ကိုယ်ကိုကိုယ် အဆုံးစီရင်တော့ မှာပါ..
ယခုစာကိုဖက်မိသော ညီမလေးများ၊အမများအားလုံး ကိုယ်ကိုကိုယ် ဆင်ခြင်နေထိုင်ကြပါလို့ဆုတောင်းရင်း
ကျွန်တော်စာကို အံသြထိတ်လန့် စွာဖက်နေမိတယ်..
ပန်းဝတ်မှုန် ဘာကြောင့် ယခုလို သူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုမထောက် ဖြန့် ဝေရတာလဲ....
ပြီတော့ကျွန်တော်တို့သန့် သန့်ရှင်းရှင်း နေခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ နှစ်ယောက်လုံးအသိပါပဲ......
သူ့ အတွက် အသုံးစရိတ်တကြိမ်မပို့ ယုံ , ဖုန်းတခါ မဆက်ယုံနဲ့ဘာလို့ ဒီလိုလုပ်ရတာလဲ....
အယောက်(၃၀၀)လောက်ဆီပြန့် သွားတဲ့ကျွန်တ်ေရဲ့ အကြောင်း ၊ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေ ကို ဒီကိစ္စနဲ့ 
ပြီတော့အစဉ်အလာကြီမားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ဂုဏ်ဒြပ်နဲ့ နေတဲ့ကျွန်တော် မိဘတွေ၊ဂုဏ်သိက္ခာ
အစွန်းအထင်း မရှိခဲ့ ဘူး တဲ့ကျွန်တော် တခုခုကိုတော့ဆုံးဖြတ်ရတော့မယ်.........။
ကျွန်တော် အခန်းအပြင်ဖက်ထွက်လာပြီ ဦတည်ရာမဲ့အရူးတယောက်လို လျောက်သွားနေမိတယ်..
7-ELEVEN ဆိုင်ထဲဝင်ပြီ ဘီယာ (၁၀)လုံးလောက်ဝယ်ပြီ အရာအားလုံးကို မေ့ သွားဖို့ အတွက် သောက်ရတော့ 
မယ်၊ အငန်းမရနဲ့ဆက်တိုက်သောက်ပြီ ရထားလမ်းရှိရာ အရပ်ဖက်သို့ထွက်လာခဲ့ တယ်..
တရှိန်းထိုးသွားနေတဲ့ရထားအောက်မှာ အရာအားလုံး မေ့ ပျောက်သွာမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိတယ်လေ။
အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ လာနေတဲ့ရထားအောက်ကို ကျွန်တော် ခုန်ဝင်လိုက်ချိန်မှာတော့ .........
တော်ပါသေးရဲ့အိမ်မက် မက်နေတာကို ဒီနေ့ အလုပ်ပင်ပန်းတာကို"
"မိန်းမ ကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ရင် အပြင်မှာတောင် ဟုတ်ဘူး အိမ်မက်ထဲမှာတောင် ကံမကောင်းတဲ့ငါ့ဘ၀"
"လူပျိုကြီပဲ လုပ်တာ ကောင်ပါတယ်"
ဘေးမှာ ရှိတဲ့ ဖက်ခေါင်းအုံးလေးပဲ တယုတယ ထွေးပိုက်ပြီ ကျွန်တော်ပြန်အိပ်ဖို့ကြိုစားလိုက်ပါတယ်......။ ။ ။
Posted by သျှင်နေမင်း at 4:45 AM
ဒို့ချစ်တဲ့ နိင်ငံ
ဒို့ချစ်တဲ့ လူမျိုးအတွက်
စစ်ထွက်ရတော့ မယ် မလင်းပြာ.....။ ။ ။
ရာရာစစ ဒင်းတို့ က
လက်တုန့် ပြန် မတဲ့ 
ကျုးကျော် စစ် ၄ပွဲအကြောင်း
သင်တို့ ရဲ့သမိုင်းဟောင်းကို
အဘယ်ကဲ့ သို့အစွမ်းထက်တယ်ဆိုတာ တွေ့ ရလိမ့်မယ်.........။ ။ ။
ဗမာပြည် ကာကွယ်ဖို့ အရေး
သမီးလေက ဓားသွေးဖို့ ပေါ့ ...........။ ။ ။
ရှေ့ တန်းမှတခေါက် ပြန်မရောက်ခဲ့ ရင်
ဗမာပြည် မငြိမ်းချမ်းသရွေ့ 
အမျှမဝေပါနဲ့ ...........။ ။ ။
Posted by သျှင်နေမင်း at 6:14 AM
Posted by သျှင်နေမင်း at 8:49 AM